चालु खातामा एकमहिनामै १३.३ अर्ब घाटा थपियो, शोधानान्तर घाटा पनि अत्यासलाग्दो Bizshala -
काठमाण्डौ । आयातमा भइरहेको निरन्तरको वृद्धिका कारण चालु खाता घाटा विस्तार भई रु.२०४ अर्ब ४३ करोड पुगेको छ ।
नेपाल राष्ट्रबैंकले देशका प्रमुख आर्थिक परिसूचकहरुको चालु आर्थिक वर्षको नौ महिनासम्मको समीक्षा सार्वजनिक गर्दै चालु खाता घाटा बिस्तार हुँदै गएको बताएको हो ।
चालु खाता घाटा अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा रु.१७२ अर्ब ६७ करोडमा सीमित थियो भने अघिल्लो महिना अर्थात ८ महिनासम्ममा यस्तो घाटा रु.१९१ अर्ब १३ करोड रहेको थियो । यो हिसाबले चालु खाता घाटा एक महिनामै १३ अर्ब ३० करोडले बढेको देखिएको छ ।
अमेरिकी डलरमा अघिल्लो वर्षको नौ महिनामा १ अर्ब ६८ करोड रहेको चालु खाता घाटा समीक्षा अवधिमा १ अर्ब ७९ करोड पुगेको छ ।
समीक्षा अवधिमा शोधनान्तर स्थिति रु.६४ अर्ब ६८ करोडले घाटामा रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा शोधनान्तर स्थिति रु.१४ अर्ब ६० करोडले घाटामा रहेको थियो । अघिल्लो महिना शोधनान्तर स्थिति रु.५८ अर्ब ९९ करोडले घाटामा थियो । यसको अर्थ एक महिनामै शोधानान्तर स्थितिको घाटा ६ अर्बले बढेको देखिएको छ ।
समीक्षा अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह २०.९ प्रतिशतले वृद्धि भई रु.६५३ अर्ब १९ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह ५.६ प्रतिशतले बढेको थियो भने चालु वर्षको फागुनसम्ममा विप्रेषण आप्रवाह २३.४ प्रतिशतले वृद्धि भई रु.५८२ अर्ब १९ करोड पुगेको थियो ।
यो अवधिमा आयातको वृद्धिदर २१.३ प्रतिशत र निर्यातको वृद्धिदर १६.९ प्रतिशत रहेको छ।
आज डलरको भाउ स्थिर, युरो र पाउन्ड स्टेर्लिङको घट्यो (अन्यको
काठमाण्डौ । आज सोमबार अमेरिकी डलरको भाउ स्थिर रहेको छ भने युरो र...
आज डलर र पाउन्ड स्टेर्लिङका भाउ घट्यो, युरोको बढ्यो (अन्यको
काठमाण्डौ । आज आइतबार अमेरिकी डलर र पाउन्ड स्टेर्लिङको भाउ घटेको छ...
ई–कमर्स र सामाजिक सञ्जालबाट हुने आम्दानी अब नेपालकै बैंकमा
काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्र बैंकले ई–कमर्सलगायतका कारोबारबापत...
आज डलर र पाउन्ड स्टेर्लिङको भाउ बढ्यो, युरोको घट्यो (अन्यको
काठमाण्डौ । आज शुक्रबार डलर र पाउन्ड स्टेर्लिङको भाउ बढेको छ भने...
आज डलर, युरो र पाउन्ड स्टेर्लिङको भाउ घट्यो ? अन्य के छ ?
काठमाण्डौ । आज बिहीबार डलरसँगै युरो र पाउन्ड स्टेर्लिङको भाउ घटेको...
आज डलरसँगै बढ्यो युरो र पाउन्ड स्टेर्लिङको भाउ (अन्यको
काठमाण्डौ । आज बुधबार डलरसँगै युरो र पाउन्ड स्टेर्लिङको बढेको...
आज डलरको भाउ घट्यो, युरो र पाउन्ड स्टेर्लिङको बढ्यो (अन्यको
काठमाण्डौ । आज मंगलबार डलरको भाउ घटेको छ भने युरो र पाउन्ड...
डलर र युरोको भाउ बढ्यो, पाउन्ड स्टेर्लिङमा पहिरो (अन्यको
काठमाण्डौ । आज आइतबार डलरको र युरोको भाउ बढेको छ भने पाउन्ड...